သောသီခို: ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး တပ်မဟာ (၅) ဌာနချုပ်ရုံး ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး တပ်မဟာ (၅) ဌာနချုပ်ရုံး ရှင်းလင်းတင်ပြချက်
မူးရင်းပို့ စ် - http://luthawpawday.blogspot.com.au/2013/06/blog-post_23.html Type the rest of your post here.
ဒီခွေးသူတောင်းစားတွေ ကိုစာတွေဘာတွေနဲ့ရေးသားပြောဆိုတဲ့အခါမှာ ဒီ
((((( ကျွန်တော်))))) ဆို တဲ့ ကျွန်ခေတ် က ကျွန်တွေကနေ သူတို့ သခင်ကို
ပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့ အသုံးအနုန်းတွေနဲ့ အသုံးနှုန်းပါနဲ့ တော့ဆိုတာ အဲဒီစာရိုက်တဲ့လူကို လမ်းကြုံပါးလိုက်စမ်းပါဗျာ...ပါးစပ် ကအကျင့် ပါနေပြီး
တစ်ခြား အသုံးအနုန်းတွေကို အဲဒီ (((ကျွန်တော်))) နေရာမှမသုံးတတ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း စာလုံးပေါင်းကို ကျနော် လို့ ပြင်ရေးကြပါ...ကျုပ်တို့ က ရင်တွေက ကျွန်တွေမဟုတ် လို့ကျူပ်တို့သခင်တွေမဟုတ်တဲ့ဒီခွေးသူတောင်းစားတွေကို ကျွန်တော်လို့ သုံးနုံးပြီးပြောစရာမလိုပါ..ပြီးတော့ဘာမှ ခိုင်လုံပြီး မသေခြာသေးတဲ့ သူတို့ ရဲ့
နိုင်ငံရေးလှည်းကွက်ထဲမှာကျူပ်တို့ လုပ်စရာရှိတာတွေကို ရပ်တန့် ထားစရာမလိုပါဘူး..လုပ်စရာရှိတာကို အောက်က လူတွေကလုပ်ပါ..အထက်က ရန်သူရဲ့ လာဘ်ထိုးတာကို စားထားနဲ့ကောင်တွေကလည်း မျက်စိတွေအမြန်ပွင့်လာပြီးလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ ရန်သူရဲ့ လှည့်ကွက်ကို
အမြန် သိလာပြီးခင်ဗျားတို့ လုပ်စရာရှိတာခင်ဗျားတို့ လုပ်ပါ..အောက်ကလူတွေက်တော့သူတို့ လုပ်စရာရှိတာကို သူတို့ လုပ်မှာဘဲ.ခင်ဗျားတို့ ကို ခြေရှင်းကြပါ...ဒါမှမလုပ်တတ်ရင် နုတ်ထွက်ကြ ..နိုင်ငံရေးမလုပ်ကြနဲ့ ..အများစုအတွက်မလုပ်နဲ့ ..မင်းတို့ မိသားစုအတွက်ဘဲ စီးပွားရေးလုပ်ကြ...
It's sounds very nice. I agree with you!!!!!~
အထူးမဟာဗျူဟာမှူး၊ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဗိုလ်မှူးကြီး တိုက်ဂါးPHOTOS BY Than Htaik Thu http://democracyforburma.wordpress.com/2013/06/26/အထူးမဟာဗ%E1%80%BA%E1%80%B4ဟာမ%E1%80%BD%E1%80%B4း၊-knuknla-%E1%81%BFငိမ/
watch out!any indigenous karen people from burma who really want to retain their arms and motherland must be sent their children to brigade5or central special force training place for reinforcement the number of Karen freedom fighter.otherwise,unless you retain your arms and prepare for the fight,surely the junta regime will come over and demolish your heritage as their start doing it now at some part of the area then you will be no longer the people/person that they dehumanized monks of the victim during demostration in 2008.This junta venerate budha/monk but killig monks.